DEG DEG:- Ciidamada Itoobiya oo gebi ahaan isaga baxay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidamada Itoobiya oo gebi ahaan isaga baxay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud
Wararka haatan naga soo gaaraya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ay gebi ahaan isaga baxeen halkaasi, iyagoona u ruqaansaday dhinaca degmada Dhuusamareeb oo isla gobolkaasi ku yaalla.
Ciidankaasi oo labadii maalmoood lasoo dhaafay qorsheeynayay inay isaga baxaan degmada Ceelbuur, ayaa muddo 4 sano ah gacanta ku haayay degmadaasi, halkaas oo markii dambe ay go’doon ku galeen, kadib markii weeraro joogto ah ay kala kulmeen dagaalyahanadda Al-shabaab.
Sidoo kale, ciidamada Itoobiyaanka ayaa la sheegayaa inay dhawaan ka bixi doonaan deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin gobolada Hiiraan iyo Galgaduud.
Ciidamadaan ayaa daba socda ciidamo kale oo aan badneyn, kuwaasi oo dhawaan isaga baxay degmadaasi Ceelbuur.
Degmada Ceelbuur waxaa hadda ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo u diyaar garoobaya inay iska difaacaan ciidamada Al-shabaab.
Illaa iyo haatan lama oga sababta keentay in ciidankaasi ay isaga baxaan degmada Ceelbuur, iyadoona arrintaan ay qeyb ka tahay qorshe ay Itoobiya wadatay horaantii sanadkii 2016-ka, balse uu codsaday in la hakiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.